अब के अर्चनाको भाग्य भारतमा चम्कन्छ त? | Glamour Nepal HomeNewsRegionalBollywoodHollywoodReality ShowFashionFashion NewsFashion CornerMiss NepalMusicMusic NewsMusic VideosAudio SongsBest Of The BestMovies JukeboxLife StyleFest & TraditionFood & RecipesHealth & FitnessLove & LifeMakeup & OutfitsPhotosModelsArtistsSingersEventsSaptahik ModelsPoster & PhotosWallpaper DownloadMix MaxVideosPhoto ShootVideo ClipsVideo NewsTvSongsTrailersMoviesFashionSocialInterviewsVideo ClipsFunnyNews & GossipsBlogBlog In EnglishBlog in Nepaliनेपालीफिल्मी न्युजबलिउडहलिउडगसिपफेशनगीत संगीतरियालिटी सोलाईफ स्टाईल
अब के अर्चनाको भाग्य भारतमा चम्कन्छ त?by Glamour NepalFebruary 4, 2017
पोर्नस्टार बन्छु भन्दै राता रात चर्चामा आएकी थीइन अर्चना पनेरु। सामाजिक सञ्जालमा उनका केहि टपलेस दृश्यहरु छताछुल्ल भएका थिए तेतिबेला। उनले एक बर्ष भित्रै दुइ नेपाली फिल्ममा पनि अभिनय गरिन। आधा दर्जन जति म्युजिक भिडियोहरुमा पनि। ति फिल्महरुको पनि अर्चनाका कारण सामाजिक संजालहरुमा निकै चर्चा थियो तर फिल्मले व्यापार भने गर्न सकेन।अर्चनाको बारेमा अब भारतमा पनि चर्चा बढेको छ। भारतिए अनलाइन दैनिक भास्करले अर्चनाको बारेमा स्टोरी लेख्दै नेपाली सन्नि लियोनको उपमा पनि दिएको छ। अर्चनाले एक फिल्म खेल्दा साढे चार करोड लिने गरेको समेत वलिउड भास्करले लेखेको छ। सबटाइटलमा अर्चनाको रेट ४.५ करोड लेखेको अनलाइनले पुर्ण न्यूजमा भने ४.५ लाख लेखेको छ। रमाइलो कुरा त के छ भने अर्चनालाइ केहि लाखमा मात्र राजु गिरीले ‘जिस्म’ फिल्मबाट डेब्यू गराएका थिए। अब के अर्चनाको भाग्य भारतमा चम्कन्छ त ? कौतुहलता को बिषय बनेको छ – अर्चनका फ्यानहरुको!
Subscribe You Tube उमेरले पाँच दशक पार गरिसकेका भुवन केसीको रहर!
माला सँग आइटम डान्स गर्न एकै रातमा तन्दुरुस्त निश्चल!
अर्चनाको भरोसा अव ‘जिस्म’मा ! यस्तो बन्यो ट्रेलर – हेर्नुहोस् भिडीयो
पहिले पाखामा, अहिले काखमा !
पोर्न नायिका : बलिउड सन्नी, कलिउडमा अर्चनाको चर्चा !
जिस्मका निर्देशक सहित अर्चना पनेरु प्रहरीको नियन्त्रणमा
अर्चना पनेरु संगै भिडियोमा देखिएका पुरुष को हुन् ? – भिडियो सहित